Mangarano dia lehilahy iray no niditra tao anatina cyber. Napetrany teo anoloan’ilay trano nidirany ny moto nentiny. Tsikaritr’ireto tovolahy roa ny fihetsika ka nohararaotin’izy ireo nangalarina. Novelomin’izy ireo ary nentiny. Raha vao nivoaka ny cyber ilay lehilahy dia nahatsikaritra fa tsy teo intsony ny fananany ka nampandrenesiny avy hatrany ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria Mangarano. Nandray ny andraikiny avy hatrany ireo tamin’ny alalan’ny fikarohana. Taorian’ny angom- baovao isan-karazany, voasambotra fotoana fohy taty aoriana tany amin’ny parcelle 21/51 Mangarivotra, niaraka tamin’ilay moto ny tovolahy roa tompon’antoka. Nandritra ny fisamborana dia mbola nahitana karazana clé maromaro tany amin’izy ireo.Noho izy ireo tsy ampy taona, natolotra ny polisy, sampandraharaha misahana ny zaza tsy ampy taona Toamasina izy roa ireto hanohizana ny fanadihadiana.